MB 2016 Mey - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2016 Mey
Isaky ny volana febroary eto Etazonia, dia ankalazaina ny volana mainty hoditra. Mandritra izany fotoana izany, ankalazainay ny zava-bita maro nataon'ny Afrikana-Amerikana ho tombontsoan'ny firenentsika. Tsaroantsika ihany koa ny fijalian'ny taranaka mifandimby, manomboka amin'ny fanandevozana sy ny fanavakavahana ka hatramin'ny fanavakavaham-bolon-koditra maharitra. Tamin'ity volana ity dia tsapako fa misy tantara iray ao amin'ny Fiangonana izay tsy nojerena matetika - ny anjara asa lehibe nataon'ireo fiangonana Afrikana-Amerikana voalohany teo amin'ny fisian'ny finoana Kristiana.
Nanana ny fotoam-pivavahan'ny Amerikana Amerikana izahay hatramin'ny voalohany-tany Etazonia! Ny paroasy amerikanina voalohany voalohany dia nanomboka tamin'ny 1758, nialoha ny ady an-trano. Ireo fiangonana tany am-boalohany dia nipoitra teo ambanin'ny ziogan'ny fanandevozana ratsy. Ireo tompon'ny andevo dia miahiahy amin'ny karazana fiaraha-mientana voalamina eo amin'ny andevo; saingy na eo aza ny fanenjehana mahatsiravina, dia maro no nahita vondron-kery sy fanantenana ary famerenana amin'ny laoniny ny fampianaran'ny filazantsara.
Ny ampahany hafa amin'ny lova manankarena izay mivoatra avy amin'ny fiorenan'ny finoana eo ambany fanandevozana dia ny filazantsara. Tahaka ny henoina avy amin'ny fanahy ara-panahy maro, ny Kristiana nogadraina dia nahita fampahafantarana mafy ny tantaran'i Mosesy izay nitarika ny Israelita hivoaka avy tany Ejipta hitondra azy ireo tany amin'ny Tany Nampanantenaina. Ireo afrikana-amerikanina ireo dia nohamafisin'ny fanandevozana fa ny olom-boafidin'Andriamanitra dia andevozana ary notarihin'i Andriamanitra ho amin'ny fahalalahana ho vondron'ny finoana. Ireo mpino ireo dia nahalala mialoha ny zavatra niainan'ny Isiraelita ary nametraka ny fanantenany fanavotana mandrakizay ao amin'Ilay Andriamanitra tokana.
Ny fiangonana amerikana afrikanina dia mbola manohy toeram-pankalazana sy vondron'olona mandraka ankehitriny. Ny mpitondra Kristiana afrikanina-Amerikanina dia no loha laharana tamin'ny hetsika sivily sivily ary nanohy ny fandrosoana fiovana lehibe miorina amin'ny fitsipika Kristiana. Na dia matetika isika mankalaza ny fahamendrehan'ny tsirairay ao anatin'ny Black History Month, dia ilaina ihany ny mahatadidy ireo fanomezana lehibe natolotry ireo paroasy ireo nandritra ny fotoana maharitra. Raha mbola nanohy ny fivoriam-bavaka sy ny fikarakarana pastora ary ny vondrom-piarahamonina ny fiangonana Afrikanina tany am-boalohany, efa ela izy ireo dia lasa ampahany amin'ny fomban'ny finoana lehibe kokoa ao anatin'ny Kristianisma izay nifarana tamin'ny mpanara-dia an'i Kristy voalohany.
Iray amin’ireo niova fo voalohany taorian’ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty — na dia talohan’ny apostoly Paoly aza! - dia ionoka Etiopiana. Ao amin’ny Asan’ny Apostoly toko faha-8 ilay fitantarana. Nisy “anjelin’ny Tompo” nilaza tamin’i Filipo mba hidina amin’ny lalana mitokana mankany Gaza. Tany no nihaonany tamin’ny lehilahy mahery iray avy any Etiopia izay nitana toerana ambony tao an-dapan’ny mpanjakavavy. Efa naroboka tao amin’ny andalan-teny iray avy ao amin’ny bokin’i Isaia ilay lehilahy, rehefa notarihin’ny Fanahy Masina i Filipo, dia nanatona azy ka niresaka taminy. Izy dia “nanomboka tamin’izany teny izany ka nitory ny filazantsaran’i Jesosy taminy” (andininy 35). Fotoana fohy taorian’izay dia natao batisa ilay ionoka ary “nandeha tamim-pifaliana teo amin’ny lalany” (Lotera 1984).
Ny manam-pahaizana dia mihevitra ity tatitra ity hoe sary mahafinaritra ny fomba nielezan'ny filazantsara hatrany amin'ny faran'izao tontolo izao. Ity koa dia mampiseho fanoloran-tena voalohany sy mazava fa ny olona avy amin'ny foko, firenena, kolontsaina ary fiaviana samihafa dia raisina tsara ao amin'ny Fanjakan'i Kristy. Na dia tsy azo hamarinina aza izany dia azo inoana, ny sasany amin'ireo fomban-drazana kristiana tany am-boalohany dia manondro ny fampielezana ny vaovao tsaran'i Jesosy ho an'ny tandapa etiopiana ao amin'ny kaontinanta afrikanina.
Tiako ny mandalina ny tantara samy hafa sy mavitrika amin'ny fotoam-pivavahana kristianina manerana izao tontolo izao satria mampahatsiahy ahy ny lova manankarena sy miovaova. Isika ao amin'ny GCI koa dia ao anatin'ity fomba fanao ity. Fahasoavana lehibe manasoa ny vokatry ny firaisana amin'ny fahasamihafan'ny maha-mpikambana antsika ny Grace Communion International. Manana fiangonana manerana an'izao tontolo izao isika ary miaina fitomboana mahafinaritra, nataon'Andriamanitra, manerantany. Tao anatin'ny taona vitsivitsy monja, dia nandray mpikambana vaovao 5.000 200 sy fiangonana vaovao izahay, anisan'izany ny fiangonana maro any amin'ny kaontinanta afrikanina! Mahagaga ny fomba ahafahan'ny olona manana foko sy firazanam-pirenena samihafa sy zavatra niainana eo amin'ny fanompoana amin'ny Andriamanitra telo izay iray ihany. Tena manamafy orina ny fiangonana izany raha manome lanja ireo fanomezana sy fivoarana ara-tantara samihafa ao amin'ny vatan'i Kristy. Ny Andriamanitsika dia ilay niantso antsika handrava ny sakana ary hiasa ho an'ny firaisana ao anaty Fiangonana mifototra amin'ny fiainantsika vaovao ao amin'i Jesosy Kristy.
Ho fankasitrahana ny fanohanan'ireo rahalahiko sy anabaviko ao amin'i Kristy,